ကျောင်းပရဝုဏ်ဘလော့ - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
391 ကို At MSCS ဘွဲ့ချီးမြှင် 40 နိုင်ငံများအသင်းကနေဘွဲ့ရ ...
'' ComPro '' အကယ်. 'Computer ပညာရှင်များအစီအစဉ်' 'အဘို့အတို ...
သငျသညျခေါင်းဆောင်မှုကိုလေ့လာသွားနေတယ်ဆိုရင်, ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့်အတူလေ့လာတယျ။ နှစ်ကြိမ် ...
ကျောင်းသားများ Edge "နွေဦးရာသီမူဘောင်" အသိပညာဖြတ်တောက်ခြင်းရ: ဒီ ...
'' ComPro '' ကျောင်းသားများအတွေ့အကြုံရှိ, 111 ကတည်းက 1996 နိုင်ငံများအသင်း မှစ. လာကြ ...
ရုံကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ထက် Multi-ယဉ်ကျေးမှု Living ပို၏အကျိုးကျေးဇူးများ ...
mum ကျောင်းသား International, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားခုနှစ်တွင်အမေဇုံ Award ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိ ...
သြဂုတ်လ 23, 2016
ဒါဟာနွေဦးပေါက် mum များအတွက်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအလုပ်ရှာဖွေရေး Center က ...
ဇူလိုင်လ 23, 2016
ကျောင်းဆင်းပွဲလှုပ်ရှားမှုများစဉ်အတွင်းပြီးခဲ့သည့်လက, အ mum Computer ကို ...
ဧပြီလ 23, 2016
ဇန်နဝါရီလ 23, 2016
အများဆုံးတက္ကသိုလ်များမှာ, ကျောင်းသားများအခါစာသင်ကြီးစွန်းထားခဲ့ပါ ...
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2015
သြဂုတ်လ 24, 2014
Zheng ယန်အသိပညာအဘို့ခိုင်ခံ့, ရေငတ်ခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒရှိပါတယ် ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2014
Damian Finol အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလာရန်မလူစိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာသူ ...